Sidee loo Furi karaa Dispensary Cannabis Illinois? Halkaan ka aqriso wixii ku saabsan.
Buug Wada tashi Hada
Sidee loo furayaa Xashiishadda cannabis?
Furitaanka dawada xashiishadda waa riyo ay dad badani ku sii kicinayaan qulqulka cagaaran ee xashiishadda iyadoo dawlado badan ay sharciyeeyaan. Ganacsiga xashiishadda ee THC ayaa la filayaa inay ka korto 20 Bilyan 2020 illaa 80 Billion marka loo gaaro 2030 iyada oo ay sii kordhayaan dawlado badan oo sharci ah. Maanta, waxaan diirada saari doonaa furitaanka xashiishadda cannabis suuqa soo ifbaxa ee Illinois.
Sanadka 2019, Illinois waxay noqotay gobolka 11aad ee sharci ka dhiga xashiishadda cannabis. Sidoo kale waxay ahayd dawladdii ugu horreysay ee tan ku gaadha sharci. Hada waxaa gobolka ka jira 55 xashiishad daawo oo shatiyeysan oo shati leh, maadaama xashiishadda caafimaad ay sharci ahayd sanadkii 2014.
shatiga qaybinta Illinois
Illinois waxay soo saari doontaa ilaa 75 shati oo tafaariiqda xashiishka madadaalo ee dalbadayaasha codsadeyaasha ah Maajo 2020 (oo dib loo dhigay illaa Sebtember), iyadoo la adeegsanayo codsiyada la heli karo laga bilaabo Oktoobar 2019. Iyadoo dakhliga ka soo baxa dawooyinka xashiishadda ee balaayiin doolar kor u kacayaan, horumarkan ayaa soo bandhigaya fursad qaali ah. Si kastaba ha noqotee, furitaanka iyo socodsiinta daawada xashiishka waa tartan ganacsi oo adag.
Furitaanka guri furan ayaa u baahan tixgelin badan, u hoggaansanaanta qawaaniin fara badan iyo lacag fara badan oo raasamaal ah. Haddii aad haysato waxa ay qaadanayso, halkan waxaa ku yaal hage dhameystiran oo ku saabsan sida looga furayo gudaha magaalada Illinois.
Codsiga Dispensary ee Cannabis ee Illinois Cannabis PDF
1. Diyaarso Qorshe Ganacsi
Waa maxay su'aasha ugu muhiimsan ee qorshahaaga ganacsi ee xashiishadda canugga ka jawaabi doono?
Intee in la furo dawada xashiishadda?
Waxaad u baahan doontaa qorshe ganacsi haddii aad rabto inaad ka furato Illinois xashiishadda cannabis. Waxaa jira dhowr waji oo ay tahay in qorshahaaga ganacsi uu daboolo. Kuwani waxaa lagu sharaxay si faahfaahsan hoosta:
Sharraxaadda Soosaarka / Adeegga - Tani waxaay ku saabsan tahay sidaad u qorsheyn laheyd inaad maamusho xashiishadda cannabis iyo dhinacyada gaarka ah ee ku saabsan. Iskuday inaad ahaato sida ugu macquulsan ee suuragalka ah. Ku dar faahfaahinta noocyada ubaxa aad u fidin doonto iyo halka aad ka soo saari doonto.
Cilmi baarista Suuqa - Qeybtani waxaa ku jira qaababkii aad u adeegsan jirtey si aad u ogaato macaamiishaada bartilmaameedka ah iyo sida xogtaan u saameyn doonto suuqgeyntaada, howlahaaga iyo qiimeyntaada. Had iyo jeer isticmaal lambarro la taaban karo (oo ay ku habboon tahay inuu dhinac saddexaad xaqiijiyo) intii aad qiyaasi lahayd.
Tartamayaasha - Waxaa ku jira faahfaahinta ganacsiyada kale ee aad la tartami doontid, ha ahaato toos ama si aan toos ahayn. Maxay yihiin awoodahooda iyo daciifnimadooda, sideese u qorsheyneysaa inaad kala duwanaato meheraddaada.
Kooxda Hoggaanka - Qaybtani waxaa ku jira soo koobitaan shahaadooyinkaaga iyo kuwa kooxdaada maaraynta. Waxaad ku dari kartaa waayo-aragnimada horumarinta ganacsiga qaybaha kale, xirfadaha hoggaaminta ama adeegga macaamiisha.
Waxyaabaha Maaliyaddu - Qaybtani waxay noqon kartaa wax cabsi leh. Waxay ku lug leedahay samaynta miisaaniyad cad oo kooban. Waa inaad ku dartaa muddo dheer (dheh 5 sano) saadaalin maaliyadeed oo ay kujirto kharashaadka hawlgalka, macaashka saafiga ah iyo dakhliga sanadlaha la saadaaliyay.
Saadaalin dakhli ayaa la sameeyaa iyadoo la qiyaasayo inta badeecada aad u maleynaysid inaad iibin doonto qiimaha wax soo saarka, qiimaha tafaariiqda iyo kharashyada isugeynta (mushaharka, kirada, gaadiidka, iwm.). Waxa kale oo aad ku dari kartaa jabsi-xitaa falanqayn, oo leh waqti qiyaaseed illaa faa iidada laga helayo.
Shuruudaha-gaarka ah ee Illinois - Waxaad ku dari kartaa faahfaahinta daboolaysa nidaamyadaada amniga, rarida badeecada aaminka ah, dabagalka alaabada, qorshayaasha qashinka iyo shuruudaha kale ee gobolka. Ogsoonow in kuwan lagu dari karo dalabkaaga.
Soo-jeedinta Maal-gelinta - Waxay ku lug leedahay sida aad u qiimeyn doonto saamiyadaada haddii aad u bandhigto qorshahaaga maal-gashadayaasha. La tasho CPA si aad u hubiso inaad u hoggaansanto qawaaniinta gobolka iyo federaalka.
2. Hel Ruqsadda Raaxada Xashiishka
Helitaanka ruqsadda cannabis tafaariiqda ee Illinois, ama gobol kasta waxay noqon kartaa mid aad u dhib badan oo qaali ah. Waaxda Sharciga Maaliyadeed iyo Xirfadeed ee Illinois (DFPR) waxaa loo xilsaaray ruqsad siinta xashiishadda ee Illinois. Waxa jira shuruudo adag oo milkiilayaasha guryaha laga doonayo ay leeyihiin.
Codsadayaashu waa inay maraan baaritaanka taariikh ahaaneed, sii daayaan canshuur celin buuxda sanadihii lasoo dhaafay oo ay soo bandhigaan wixii kicitaan ah ee dhacay ama defafyada amaahda ardayda, lacagta masruufka ama masruufka caruurta. Waa inaad soo gudbisaa arji liisanka oggolaanshaha adeegsiga dadka waaweyn ee shardiga shatiga oo ay weheliso khidmadda aan la soo celin karin $ 5,000. Mar alla markii aad hesho rukhsad, waxaa jira $ 30,000 oo ah ujrada oggolaanshaha 12ka bilood ee ugu horreeya.
Cusboonaysiinta oggolaanshaha sannadlaha ah waa $ 30,000. Waxaa sidoo kale lagaa rabaa inaad caddeyso $ 50,000 oo xog-warran ah oona muujiso awood ku filan. Xusuusnow inay jiraan ajuuro kale oo dheeri ah oo la xidhiidha ka shaqeynta xashiishadda cannabis.
Kuwaas waxaa ka mid ah $ 25,000 oo ah cusboonaysiinta isdiiwaangelinta diiwaangelinta ku-meel gaarka ah iyo $ 50 (midkasta) oo bixinaya cusboonaysiinta wakiilka, kaarka aqoonsiga iyo ujrada bedelka diiwaangelinta. Shatiga xashiishadda cannabis ee Illinois waxay ku saleysan tahay nidaam 250-dhibcood ah. Hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah qaababka dhibco lagu dhaliyo:
Amniga iyo diiwaangelinta
Qorshaha ganacsiga, dhaqaalihiisa, qorshaha dabaqa iyo qorshaha howlgalada
Ku habboonaanta qorshaha tababarka aqoonta shaqaalaha
Aqoonta / waayo-aragnimada xashiishka
Qorshaha kala duwanaanta
Dhaqancelinta Shaqada iyo Shaqaalaha
Waxaa xusid mudan inaad kubixinayso ilo aad u fara badan oo ku saabsan u hogaansanaanta qawaaniinta, waxaadna ubaahantahay inaad horay usii qorsheysato tan.
Marabtaa inaad Furiiso
3. U hel goob ku habboon Khibradaada
75 shatiyada tafaariiqda ah ee xashiishadda madaddaalada ee laga soo saaray gobolka Illinois ayaa loo qaybiyay 17ka xafiis ee Tirakoobka Shaqaalaha (BLS) ee gobolka. Tan waxaa loo sameeyay si loo hubiyo in juqraafi ahaan loo kala firidhsan yahay oo loo baahin karo xashiishadda cannabis. Tan waxaa loola jeedaa waa in farriintaadu ay tahay in laga helo gudaha gobolka BLS si tafaasiil leh dalabka shatigaaga.
Marka rukhsaddaada la oggolaado, waxaad haysataa oo keliya 6 bilood (180 maalmood) si aad u doorato goob muuqaal ah oo ku yaal kaydka dawada cannabis. Goobtu waa inay buuxisaa shuruudaha qaarkood. Waxay ka faahfaahsan yihiin hoos:
Waa inay ahaato mid ku habboon helitaanka dadweynaha
Waa inuu lahaadaa qaabeyn fududeynaya xashiishadda cannabis
Waa inuu ahaadaa mid kufilan cabirka, iftiinka, qoondaynta awooda, maareynta badeecada iyo keydinta
Waa inuu lahaadaa baarkin ku filan iyo meel furan oo gala meel looga baxo iyo meelaha laga baxo.
Waa inaanu ku jirin meel 1,000 fuudh xarun kale oo xashiishad ah, iskuul, soonaha deegaanka ama meesha lagu caabudo.
Marka la eego shuruudahan, soo saaridda cabasho qaybeed waxay ku kici kartaa meel kasta $ 300,000 illaa 1 milyan iyadoo kuxiran cabirka, qaabka iyo kakanaanta. Waxaa kale oo muhiim ah in la hubiyo in milkiilaha meeshuu ku yaallo meesha uu ku yaal uu ku fiican yahay ganacsiga ganacsiga. Milkiileyaasha guryaha qaarkood ayaa laga yaabaa inaysan taageerin ganacsi laxiriira xashiishadda sharci-darrada ah ee federaalnimada darteed, qaan-garooyinka suurtagalka ah ama cadaadiska ka yimaada fulinta sharciga.
4. Hel Alaabtaada
Sida uu qabo sharciga Illinois, xashiishadda cannabis ayaa looga baahan yahay inay bixiso noocyo kala duwan oo ka mid ah xarumaha lagu beero xashiishadda kaladuwan. Alaabada la iibin karo ee laga iibin karo dukaankaaga kaydiyaha kaluunka ah kama badna 40% wadarta guud ee alaabadaada. Tani waxay hubineysaa in macaamiishaadu ay leeyihiin kala duwanaansho ku filan. Waxay sidoo kale ka niyad jabineysaa dadka wax soo iibsada inay si gaar ah u kaydiyaan badeecadooda markey sameystaan ​​wexey kala baxaan.
Gobollada qaarkood waxay u baahan yihiin in kaadiyaashu ay koraan xashiishaddooda. Nasiib wanaagse, arintu sidan uma ahan Illinois. Si kastaba ha noqotee, waxaad indhaha u saari kartaa sameynta xarun wax-soo-saar markii ay furitaankaaga mareysid. Waa caado fiican in laga helo cannabis noocyo kala duwan. Macaamiisha kaladuwan waxay door bidaan badeecado kaladuwan sida cunada, culeyska, dabab ama saliidaha.
5. Suuq Qaadashada Xashiishkaaga
Suuqyadu waxay ka kooban tahay go'aaminta waxa ganacsigaaga kala soocaya iyo sida aad tan ugu ogeysiiso in macaamiisha saldhig looga dhigo. Si kastaba ha noqotee, suuq geynta xashiishadda cannabis waxay leedahay waxyaabo badan oo ay tahay inaad lasocoto. Gudaha Illinois, kama qeyb geli kartid suuq geyn ama marin habaabin, kor u qaadda isticmaalka xashiishadda, oo ay ku jiraan sawirrada caleen ama burooyinka ama waxay muujineysaa isticmaalka sheyga.
Sidoo kale ma sameyn kartid sheegasho dawo ama daaweyn ah oo ku saabsan badeecadaada ama uma adeegsan kartid sawirro rafcaan u noqon kara carruurta yaryar (kartoonnada, xayawaanka guryaha lagu ciyaaro ama alaabada lagu ciyaaro). Sidoo kale, kuma xayeysiin kartid kala-baxaaga raadiyaha, telefishanka ama gaadiidka dadweynaha. Suuqyada ugu wanaagsan ee suuq geynta xashiishadda cannabis waxaa ka mid ah websaydhyada, warbaahinta bulshada, barnaamijyada mobilada (Leafly iyo Weed Khariidadaha), joornaalada iyo barnaamijyada daacadnimada / gudbinta.
Shuruudaha lagu iibsado marijuanaana sharci ah ee Illinois ee Dispensary ah
Sannadkii 2013, gobolka Illinois wuxuu marijuana u sahlay bukaannada u baahan xaalado caafimaad oo kala duwan. Gobolka ayaa bilaabay barnaamij tijaabo ah oo loogu magac daray Isticmaalka Raxmaanka ee Xashiishadda Caafimaadka. Diiwaan-galinta bukaanka ayaa la qoray oo bukaanno uqalma iyo sidoo kale daryeel bixiyayaashooda loogu talagalay ayaa laga ilaalin doonaa maxkamadaynta iyo qabashada.
Haatan waa 2019 oo gobolku wuxuu marijuana ka dhigayaa xitaa mid ka sii macquulsan. Sharci sharciyeed oo suuragal ka dhigaya in dadku iibsadaan, daabulaan oo iibiyaan marijuana madadaalo ayaa la dejiyay. Sharciga, oo ah wax ka badal sharcigii hore ee ku saabsan marijuana ayaa hakin doona marijuana si la mid ah qamriga oo u oggolaanaya adeegsiga dadka ka weyn da'da 21.
The Sharciga Xannaanada Cannabis wuxuu qeexayaa nooca macmiilka xashiishadda marijuana ee loo oggolaan doono inuu ka qeybgalo. Deganeyaasha Illinois waxay awoodi doonaan inay iibsadaan marijuana ujeedooyin madadaalo laakiin leh shuruudaha soo socda;
1. Tus caddeynta da'da kahor iibsashada.
2. Iibinta, wareejinta ama qeybinta marijuana caruurta yaryar waxaa ku jira dambi ciqaab mudan.
3. Ku wadista xashiishadda cannabis waxay noqon doontaa sharci darro.
4. Iibinta xashiishadda waa in lagu qaadaa hab sharci ah iyadoo cashuurta laga qaadayo muwaadiniinta.
5. Xashiishadda waa in la tijaabiyaa oo si ku habboon loogu calaamadeeyaa faa'iidada isticmaalaha.
6. Iibsadeyaashu waa inay soo bandhigaan dhammaan macluumaadka la heli karo ee ku saabsan wixii saameyn taban ee ka dhalan kara xashiishadda loo isticmaalo cilmi-baaris ku saleysan caddayn.
Rajada ganacsi koboca
Iyada oo sharciga cusubi dhaqso u dhaqmayo ayaa hadda la joogaa uun waqti ka hor warshadaha xashiishadda ay u noqon lahaayeen warshado bilyan badan leh. Deganeyaashu waxay ka faa iideysan karaan shatiyada kala duwan ee loo dejiyey dadka guryaha ka ganacsada iyo milkiilayaasha guryaha. Ku-xadgudubka shuruudaha sharciga cusub waxay u tahay rajo aad u run ah in Illinois ay dhowaan noqon karto xashiishadda cannabis mana jiro wax sheegid ah oo fursadaha cusub ay ku soo bixi karaan hawsha.
Sideed kuheleysaa rukhsad sahamin ah gudaha Illinois
Waxaa jira saddex nooc oo shati bixinno ah oo hoos imanaya qaybta bixiyaha oo qeexaya habka ay dadka ganacsatada ah u siin karaan marijuana gobolka. Saddexda waxaa ka mid ah;
1. Ogolaanshaha Hore u Qaadashada Adeegga Dadka Waaweyn ee Laanqeyrta Bulshada.
2. Liisanka Ururada Dadka Waaweyn ee Xaaladaha Shardiga leh.
3. Liisanka Ururada Uruurinta Dadka Waaweyn ee Loogu Yaqiinsan yahay kaliya shatiga shatiga.
Tilmaamaha loogu talagalay Oggolaanshaha Ururinta Dadka Waaweyn ee Ogolaanshaha Hore ee Ruqsadda.
Tani waa ruqsad siinta shahaadooyinka cannabis la xaqiijiyay ee lagu soo qaatay Barnaamijka Awoodda Caafimaadka ee Xannaanada Cannabis. Si aad u dalbato codsadayaasha liisanka waxaa looga baahan doonaa inay bixiyaan khidmad dhan $ 30,000 (aan la soo celin karin). Waxaa sidoo kale lagaa rabaa lacagta aan la soocelin karin ee horumarka ganacsiga ganacsiga xashiishadda oo sidoo kale aan la soo celin karin. Khidmadda waxaa lagu dallaci doonaa 3% iibka alaabooyinka la kala iibsado illaa bisha Luulyo 2018 illaa Luulyo 2019 ama khidmad go'an oo ah $ 100,000 haddii boqolkiiba bixintu ay ka badato qaddarkan. Yo sidoo kale wuxuu u baahan doonaa inuu muujiyo aqoonsiga Qorshaha Isku-Darka Sinnaanta Bulshada.
Tilmaamaha loogu talagalay Ruqsadda Siinta Ururka Sharciyeynta Shuruudo Shardi leh
Ruqsadda waxaa lagu siiyaa iyadoo la adeegsanayo nidaamka mudnaanta oo codsadayaasha ugu sareeya la siiyo liisanka. Waxaa muhiim ah in la ogaado in liisanka uusan oggoleynin iibinta ama iibsashada xashiishadda ama alaabada ku jirta cannabis. Kuwa helay liisanku waxay lahaan doonaan muddo 180 maalmood ah laga bilaabo taariikhda la ansixiyay si ay u gartaan meesha ay damacsan yihiin inay ka dhisaan dukaamadooda. Liisanka waxaa la soo saaray si loo naaquso kharashaadka qof soo galay cusub ay tahay inuu bixiyo si uu ugu biiro warshadaha iyo waxay leedahay lacag aan la soo celin karin oo $ 5,000 ah. Kuwa haysta shatiga lihi waa inay cusboonaysiiyaan liisamadooda sanad walba sicirkiiba $ 60,000. Laga bilaabo May 2020 gobolku wuxuu rajeynayaa inuu soo saaro 75 shati noocaas ah.
Tilmaamaha loogu talagalay Ruqsadda Ururinta Dadka Waaweyn ee Adeegsiga Dadka Waaweyn
Tani waa laysanka ay wada leeyihiin dhamaan dadka xiiseynaya. Ruqsadda ayaa u oggolaanaysa ganacsatada laxiriirta inay ka iibsadaan xashiishadda kuwa wax soo iibsada, xarumaha wax beero, ururrada wax lagu karsado ama warqado kale. Iyada oo noocyada shati-bixinta noocan ahi ay leeyihiin nalka cagaarka ah ee lagu iibiyo xashiishadda iyo alaabada la soo saaray, alaabada, miraha alaabada kale ee iibsadayaasha ama iibsadayaasha. Kuwani waxay sidoo kale yeelan doonaan horumarka ay ka sii iibinayaan bukaannada isticmaala xashiishadda si loogu daweeyo xaaladaha caafimaad.
Si aad u dalbato laysanka shaqsiyaadka waa inay qeyb kaqabaan lacagta dalabka ee aan lagu soo celin karin $ 30,000. Mar alla markii la siiyo liisanka, takhasusku waa inuu helaa cusboonaysiin sanad kadib taasina waxay ku kici doontaa $ 60,000. Ruqsadda noocan ah ayaa horay looga soo saaray guud ahaan gobolka iyada oo Wasaaraddu ay rajeynayso in ay bixiso 110 shatiyo dheeri ah illaa 21ka Diseembar 2021.
Qorshayaasha ganacsi waxaad u baahan doontaa inaad hesho rukhsad Dispensary
Waxaa jira shuruudo adag oo tixgelin la siinayo marka aad isu diyaarinayso in aad dalabkaaga ka dhigto mid kaar ah cannabis. Haddii aad raadineyso inaad dalbato laysanka markaa waxaad u baahan doontaa qorshayaasha ganacsi ee soo socda;
1. Heerka qorshahaaga maaliyadeed
2. Heerka qorshahaaga suuq geynta
3. Heerka diiwaanada bukaanka
4. Qaabeynta qorshaha amniga
5. Qaabeynta ku habboonaanta xarunta la soo jeediyey
6. Qaabka qorshaha shaqaaleynta
7. Qaabeynta qorshe loogu talo galay in lagu baro bukaanka
8. Qaabeynta kontaroolada alaabada
9. Qaabeynta qorshaha hawlgallada
Marijuana ujeedooyin madadaalo
Markii JB Pritzker uu ku guuleystey kursiga gudoomiyaha gobolka ee gobolka Illinois 2018, sharci-dajiyayaashu si dhakhso leh ayey ula qabsadeen diiradda ay u leeyihiin inay ka shaqeeyaan dardar-gelinta sharcinimada marijuana madaddaalada. Ka qaadista xashiishadda liiska waxyaabaha la mamnuucay iyo qaadashada guud ahaan waxay ahayd mid ka mid ah ballan qaadyadii ololaha ee uu hormuud ka ahaa maalmihii ololihiisa.
Xitaa maadaama sharciga cusub la doonayo in la meel mariyo ma saameyn doonto barnaamijka tijaabada xashiishadda si kasta. Sharciga ayaa inta badan diirada lagu saarayaa sidii loo kordhin lahaa tirada wakaaladaha isukeenida ah ee filaya in koror ku yimaado ganacsiga xashiishadda si tartiib ah oo la xakameeyo. Codsadayaasha sinnaanta waxay sii wadi doonaan qaadashada daaweynta mudnaanta leh maxaa yeelay waaxdu waxay raadineysaa qaabab badan oo lagu dabaqi karo qawaaniinta cusub si isku mid ah degmooyinka oo dhan. Iyada oo leh dhammaan shuruudaha aad ugu baahan tahay codsi guul leh, kuwa raba in ay ku soo boodaan wershadaha waxay u baahan doonaan isku dhaf nasiib iyo koox taageero wanaagsan. Waqti ayey isbedelaysaa gobolka Illinois waxayna xamaasada dhaqanka cannabis filan kartaa inay sifiican u helaan noocyada, waxyaabaha, xashiishadda cannabis.
Iyada oo la adeegsanayo dhiirrigelinta saxda ah iyo marin u helka ilaha lagama maarmaanka ah, hagahan ayaa kaa caawin kara inaad si guul leh ugu bilowdo xashiishadda cannabis ee faa'iidada leh ee ku taal Illinois. Waxaa muhiim ah in la ogaado in howshani ay qaadato waqti xitaa haddii aad haysatid ilo dhaqaale. Marka la eego tallaabooyinka shati-siinta, helitaanka meel ku habboon oo lagu horumariyo kaydkaaga dukaanka si loo buuxiyo shuruudaha gobolka, waxay qaadan kartaa muddo sannad ka badan. Warshadaha xashiishadda si weyn ayaa loo nidaamiyayaa oo caawimaad uga heshaa warshadaha, khabiirada ganacsigana waa lagu talin karaa.
Maxay Shirkaddaada Xashiishaddu U Baahan Tahay La-Taliyaha Guud ee Dibadda
Suuqa sharci ahaan xashiishadda cannabis waa websaydh adag oo sharciga iyo qawaaniinta ah. Shuruucdan waxaa lagu wareejin karaa mararka qaarkood in gobolada qaarkood, sida Pennsylvania iyo Florida, ay dhibaato kala kulmaan hirgelinta qorshayaashooda liisanka. Waxaa laga yaabaa inaysan la yaab aheyn in qaar ka ...
Borotokoolka xashiishadda ee loo yaqaan 'Dispensaries' iyo 'Grows'
Borotokoolka Xashiishadda ee Kaabayaasha iyo Kordhinta Borotokoolka Cannabis ee kaabayaasha iyo koritaanka ayaa muhiim u ah qorshaha ganacsigaaga xashiishadda. Waxaa jira dhowr nooc oo sheybaarka borotiinka ah oo laga heli karo internetka laakiin waa maxay borotiinka cannabis iyo sidee baad u samayn kartaa fikradaha saxda ah ...